China Glass Loading Machine Quotation- mpanamboatra sy mpamatsy RMB | Huashili
Fampahalalana momba ny vokatra sy takelaka Qutation
Ny halehiben'ny fanodinana fitaratra
Miasa hery (W)
MAX Fandefasana lanja
Ny haben'ny fandefasana entana
Raharaha fonosana hazo
Masinina mitondra entana
3600X2200X1700 (latabatra 800) mm
380V 50HZ / Namboarina
-70 ~ 90Kpa (Azo ahitsy arakaraka ny hatevin'ny vera)
3 sandoka 12
3.6 * 2.2 * 0.8m
Manampy 10 santimetatra
fametrahana toerana mandeha ho azy
Manomboka ny masinina, nanangana ny tanany ho azy ny masinina,
Mihodina mandeha ho azy mba hahitana ny toerana misy ny vera, dia miaraka amina rafitra mpamantatra haingana izy.Rehefa hitanao ny vera, atsangano ho azy eo ambony latabatra fanapahana ny vera, fenoy ny famatrarana fitaratra.
Ao anatin'ny 30 andro fiasana aorian'ny nanamafisana ny fandoavambola. Fonosana: Raha takiana ny famonosana tranga hazo dia fanampiny ny entana
Ny mpividy mialoha ny 30% alohan'ny famokarana, ny ambiny 70% dia alohan'ny fandefasana, 100% TT.
Ity latabatra fandefasana fiara fitaratra ity dia mety amin'ny fakana fitaratra, mamela ny fanapahana fitaratra sy ny famakiana ny latabatra mitsingevana amin'ny rivotra.
> Miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra, afaka mivezivezy malalaka ny masinina amin'ny diplaoma 360.
> Fitaratra fitadiavana manan-tsaina tsy misy fanovana tanana amin'ny zoro sandry.
> Ny fiovam-po matetika dia azo antoka ary azo antoka kokoa amin'ny fiarovana ny fitaratra.
> Fanamafisana rivotra avo lenta tsy misy làlan-drivotra fanampiny.
> Ny varingarin'ny rivotra dia fehezin'ny volavolan-dalàna mifehy ny fantsom-pandrefesana avelan'ny rivotra, mamela ny fitaratra hipetraka eo ambony latabatra misy rivotra fa tsy mihetsika fitaovana. Ataovy azo itokisana kokoa.
> Ny milina dia manana maody miasa semi-mandeha sy mandeha ho azy. Ny mode semi-automatique dia azo atomboka arakaraka ny takiana. Ny maody feno-mandeha ho azy dia mameno ny fizotry ny famoahana bokotra iray.
> Fandidiana tsotra ary azonao atao ny mampiato ny fizotran'ny asa amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fandidiana.
> Miaraka amin'ny paompy banga, ny latabatra dia afaka manomboka miasa miaraka amin'ny fifandraisana herinaratra.
Teo aloha: New Line Straight Line Beveling Edge Glass Edging Polishing Machine Miaraka Valo Fitotoana Vary
Manaraka: Masinina avo lenta matevina vita amin'ny vera
Masinina manapaka fitaratra miaraka amina vera
Masinina manapaka fitaratra miaraka amina fampiasa